Wakiilka Lautaro Martinez oo ka hadlayaa mustaqbalkiisa… iyo riyadiisa ah inuu la ciyaaro Messi – Gool FM
Wakiilka Lautaro Martinez oo ka hadlayaa mustaqbalkiisa… iyo riyadiisa ah inuu la ciyaaro Messi
(Yurub) 10 Okt 2020. Weeraryahanka reer Argantina iyo kooxda Inter Milan ee Lautaro Martinez ayaa ahaa bar-tilmaameedka koowaad ee naadiga Barcelona inta lagu gudi jiray suuqii la soo xiray ee xagaaga.
Laakiin kooxda reer Catalonia ayaa awoodi weysay inay hesho adeega Lautaro Martinez, iyadoo ay sabab u tahay inay awoodi kari waayeen bixinta lacagta lagu burburin karo heshiiskiisa naadiga Inter ee gaarsiisan 111 million euro.
Wali waxaa jira warar badan oo shaki galinaya mustaqbalka Lautaro Martinez ee kooxda Inter Milan, laakiin waxaa arrintaas ka hadlay Beto Yaque oo ah wakiilkiisa.
Beto Yaque ayaa wareysi uu ku bixiyay “TNT” wuxuu ku sheegay:
“Lautaro Martinez wuxuu helay fursad uu horumar ku sameeyo, ku shaqeeyo oo uu wax ku barto, si fiican ayuuna hadda ula qabsaday”.
“U dhaqaaqistiisa Yurub waxay ka dhigtay inuu horumar sameeyo, isla markaana uu muujiyo awoodiisa, maanta waa mid ka mid ah xiddigaha ku ciyaara heer sare, wuxuu ku faraxsan yahay inuu la ciyaaro xulka qaranka Argentina, inuu ka garab ciyaaro Lionel Messi waa riyadiisa”.
Wuxuu intaa ku daray mustaqbalka Lautaro Martinez iyo suurtogalnimada uu ugu dhaqaaqayo Barcelona, wuxuuna yiri:
“Wax badan ayaa laga yiri suurtaglnimada uu ku bixi karo Lautaro, Waxaa jiray xan badan, qof walbana wuu rabay laakiin waxba run ma ahayn, weli wuxuu heystaa qandaraas seddex sano ah, suuqa kala iibsiga ayaana hada xirmay”.
“Wali ma fariisanin, si aan uga hadalno heshiis kordhinta kooxda Inter Milan, wuxuu ku ciyaarayaa heer aad u wanaagsan, xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay isagana wax weyn ayuu u ahaa, waana wax dabiici ah inuu soo jiito indhaha kooxaha ugu waa weyn Yurub”.
Mattéo Guendouzi oo sharxay sababta uu uga tagay kooxda Arsenal
“Waan ku dabaal degi doonaa hortooda haddii aan gool ka dhaliyo Barcelona” – Luis Suarez